बूढी पोल्ने अचम्मको पर्व
September 17, 2017 Posted by Jhilko.com
१ असोज, बैतडी । सुदूरपश्चिमभरी आज बूढी पोल्ने पर्व मनाइँदैछ । विजय उत्सवका रुपमा मनाइने यस पर्वमा बूढी अर्थात् राक्षसीे पुतनालाई पोल्ने गरिन्छ । पुराणअनुसार कृष्णले राक्षसी प्रवृत्तिकी पुतनालाई मारेपछि उनका साथी गोठालाले पुतनाको शव दहन गरेको कथन रहेको पं दयाकृष्ण पन्तले बताए । द्वापर युगमा विषाक्त दूध सेवन गराई बालबालिकाको ज्यान लिने गरेकी पुतनालाई कृष्णले दूध चुसी मारेको र कृष्ण बाँचेको खुशीयालीमा असोज संक्रान्तिका दिन यो पर्व मनाइने गरिएको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा भाद्र संक्रान्तिका दिन...बाँकी
आज विश्वकर्मा पूजा गरिदै
१ असोज, काठमाडौं । निर्माण एवं सिर्जनका देउता विश्वकर्माको आज देशभर धार्मिकरुपमा पूजापाठ भइरहेको छ । काठमाडौंमा भने स्वयंभू छाउनी स्थित विश्वकर्मा मन्दिरमा पुजाआजाको घुँइचो लागेको छ । विश्वकर्मा पूजाको दिन विभिन्न उद्योग, कलकारखानामा विशेषरुपमा औजार र मेशिनको पूजा गर्ने परंपरा रहिआएको छ । व्यापारमा उन्नति र पारिवारिक सुख प्राप्त हुने धार्मिक विश्वासका साथ सुनसरी मोरङस्थित विभिन्न उद्योग, गाडीका ग्यारेज, हार्डवेयरका पसल, सवारीसाधनका साथै पसलमा पनि पूजापाठ भइरहेको छ । पूजा शुरु गर्नुअग...बाँकी
दशैंको चहलपहल ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौं । दशैं नजिकिदै गर्दा बजारमा चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । दशैं सुरु हुन एक साता मात्र बाँकी रहँदा बजारमा किनमेलगर्नेहरुको भीड देखिन थालेको हो । मंगलबारदेखि सार्वजनिक यातायातको टिकट खुला भएसँगै वसपार्कका टिकट काउन्टरहरु देखि बसपार्क बाहिरका टिकट काउन्टरहरुमा घर जानको लागि बिहानैदेखि टिकट काट्नेको भीडभाड देखिएको छ । अगाडीका वर्षहरुमा झै यस वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ्ग गर्न ढिला खुलाइएकोले कतिपय यात्रुहरुले टिकट पाउन सकिरहेका छैनन् भने टिकट हातपार्न राती देखिनै लाईन लागेर भि...बाँकी
मतदान गर्न घरतर्फ
September 16, 2017 Posted by Jhilko.com
विराटनगर । विराटनगरमा बस्दै आइरहेका सप्तरी, सिरहा र धनुषा जिल्ला स्थायी बासिन्दा मतदान गर्न आ–आफ्ना पुख्र्यौली घर फर्कन थालेका छन् । प्रदेश नं–२ मा असोज २ गते अर्थात सोमबार हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न जानेमा विराटनगरमा घर बनाएर बस्दै आइरहेका परिवार, कर्मचारी, विद्यार्थीलगायत छन् । सप्तरी, सिरहा र धनुषा जिल्लाका करिब दुई हजार परिवार विराटनगरमा घर बनाएर बस्ने गरेको, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका छन् भने कतिपय सरकार...बाँकी
दशैँ मेला उद्घाटन
September 15, 2017 Posted by Jhilko.com
३० भदौ, भक्तपुर । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री दीपक बोहराले दशैँको अवसर पारेर भक्तपुरमा आजदेखि शुरु भएको दशैँ मेलाको उद्घाटन गरेका छन् । उनले दशैँको अवसरमा विभिन्न ठाउँमा उपभोक्ता आकर्षित गर्नका लागि हुने मेलामा व्यापक उपभोक्ता ठगी हुने गरेको तर्फ सचेत रहन मेलामा आएका उपभोक्तालाई आग्रह गरे । मेलामा म्याद सकिएका सामग्रीदेखि कमसल सामग्री र सस्तो सामानलाई बढी मूल्य लिएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएकाले यो मेलामा भने गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सामानमात्रै राख्न मन्त्री बोहराले आग्रह गर्नुभयो ।&...बाँकी
असोज २ गते तराईका आठ जिल्लालाई सार्वजनिक बिदा
३० भदौ, काठमाडौँ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) यही भदौ २६ गतेको निर्णयानुसार आगामी २ गते तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुने विभिन्न आठ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा ती जिल्लामा रहेका सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । तराईका आठ जिल्ला सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा असोज २ गते स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्व...बाँकी
प्रदेश नम्बर १ का भवन निर्माणहरु अलपत्र
September 14, 2017 Posted by Jhilko.com
किन हुँदैन समयमा काम नगर्नेमाथि कार्वाही ? झापास्थित खजुरगाछी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सुरु भएको आठ बर्ष बितिसकेको छ । आ.व २०६६/०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएको सो आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ, सरोकारवाला निकाय पनि केही भन्न सक्दैनन् । मोरङस्थित पथरी उपस्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण कार्यको थालनी ०६६/०६७ मा नै हो । हालसम्म स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भई, फिनसिङको कार्य हुँदैछ भनिन्छ । तर, त्यो कार्य कहिले सम्पन्न होला ? पथरीकै जस्तो हालत छ मोरङकै डांगिहाट उप स्वास्थ्य...बाँकी
नेपाल–चीन रेलमार्ग संसारकै कठिन भूबनोटमा पर्ने
September 13, 2017 Posted by Jhilko.com
प्रकाश सिलवाल २७ भदौ, काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच जोडिने रेलमार्ग हिमालवारपारको रेलमार्गमध्ये संसारकै सबैभन्दा कठिन भूबनोट भएर जाने ठूलो उचाइको रेलमार्ग हुने भएको छ । चीनको गन्सुबाट, ल्लासा, तिनग्री, सिगात्सेदेखि नेपालको रसुवा हुँदै काठमाडौँमा रेलमार्ग जोड्न सैद्धान्तिकरुपमा दुवै देश तयार भएपछि हाल प्राविधिक अध्ययन जारी छ । सिगात्सेबाट काठमाडौँसम्म ७२४ किलोमिटर छ भने गन्सुबाट काठमाडौँ दुई हजार ४३१ किलोमिटरको रेलमार्ग दूरी पर्छ । सगरमाथाको उत्तरी मोहडाको करिब पाँच हजार मिटर उचाइमा...बाँकी
दशैं कि दशा ?
काठमाडौं । सामान्यतः कृषि–सँस्कृतिमा आधारित नेपाली समाजमा यस्ता अनेकौं चाड–पर्वहरु प्रायः बालिनाली लगाउनेदेखि बालिनाली उठाउने अवधिसम्म मनाउने गरिन्छ । नेपालका जुनसुकै वर्ण वा जातमा मनाइने पर्व, जात्रा, मेलाहरु प्रायः कृषि र मौसमी प्रणालीसँगै जोडिएर मनाइने गरेको पाइन्छ । यस्तै पर्वहरुमध्ये प्रत्येक वर्ष मनाइने दशैं यसपालि पनि नजिकिएको छ । यो पर्वको धार्मिक–साँस्कृतिक महत्वका बारेमा पक्ष र विपक्षमा मतहरु रहेकै छन् । केही समयअघिसम्म प्रायः सबैले मनाउँदै आए पनि पछिल्ला वर्...बाँकी
नारायणगढ–मुग्लिन सडक भोलीदेखि चौबीसै घण्टा
September 12, 2017 Posted by Jhilko.com
२७ भदौ, चितवन । दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्ष्य गरेर नारायणगढ–मुग्लिन सडक बुधबारदेखि चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने भएको छ । विस्तारका क्रममा रहेको सो सडकमा पहिरो खस्ने समस्या बढेपछि सुरक्षाका कारण गत असार २५ गतेदेखि रातका समयमा सडक रोकिँदै आएको छ । मुग्लिनतर्फबाट आउने सवारीलाई साँझ ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म तथा नारायणगढतर्फबाट जाने सवारीलाई दासढुंगामा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म रोकिँदै आएको छ । मौसममा सुधार आएसँगै चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी रात समयमा पनि सडक खुला गर्ने निर्ण...बाँकी